Omen’ny Fitondra-Miaramila Thailandey ‘Fanitsiana Fomba Fihetsika’ Ireo Mahasahy Hivoaka ny Laharana · Global Voices teny Malagasy
Omen'ny Fitondra-Miaramila Thailandey ‘Fanitsiana Fomba Fihetsika’ Ireo Mahasahy Hivoaka ny Laharana
Voadika ny 06 Febroary 2015 16:20 GMT
Miaramila iray nanatrika ny seminera iray nataon'ny fiarahamonim-pirenena momba ny fahalalahan'ny aterineto ary nanolo-tena ho isan'ny mpandray anjara fitenenana tao anatin'ny lahavolana. Saripika avy amin'ny pejy Facebook an'ny Tranomboky Santi Pracha Dhamma.
Miady mafy toy ny mananika tendrombohitra ny fiarahamonim-pirenena thailandey sy ny daholobe amin'ny ankapobeny raha te-hampaka-peo taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014. Ny tsy fisian'ny sehatra ifampidinihana sy ny fahalalahana no manakana ny tsikera mivantana any amin'ny fitondrana tarihin'ny miaramila, fantatra amin'ny hoe Vaomieram-Pirenena Misahana ny Fandriampahalemana sy Filaminana.
Ny Fahafahana eto amin'izao tontolo izao taona 2015, ny andiany farany indrindra amin'ny tatitra isan-taona momba ny zo ara-politika sy ny fahafahan'ny sivily any amin'ny firenena 195 manerana ny glaoby, no manasongadina ny fironana mampanahy amin'ny fanitsakitsahana misy any Thailandy.
Ny fampilaharana ny zo ara-politikan'i Thailandy nihintsana avy amin'ny 4 nankany amin'ny 6, ny fahafahana sivily ao aminy nihintsana avy amin'ny 4 nankany amin'ny 5, ary ny satany Misy Ampaham-Pahafahana nitsontsorika any amin'ny Tsy Misy Fahafahana noho ny fanonganam-panjakana ara-miaramila, izay nanafoanan'ny mpitondra ny Lalampanorenana 2007 sy nametrahana famerana henjana amin'ny fitenenana sy ny fivoriana.
Nahitana fihemorana goavana indrindra eo amin'ny fahafahana i Thailandy, [Mihemotra kokoa] noho i Libya, Soudan atsimo ary Ejipta eo amin'ny isa : Tatitry ny Tranoben'ny Fahafahana 2015
Tranga telo niseho vao haingana no ahafahana manome ohatra ny fankahalan'ny fitondra-miaramila ny fahalalahana miteny.
Tazonin'ny governemanta tohananan'ny miaramila ny mpikatroky ny zo hanan-tany iray
Mahazatra ny fitondra-miaramila ny mampiantso ny olona izay heveriny ho mpanohitra na ireo mila “fanitsiana fomba fihetsika” noho ny fananany fomba fijery hafa. Tranga niseho vao haingana ny niantsoan'ny manam-pahefana sy nitazonana ilay Tatsimo mpikatroky zo hanan-tany azy nandritra telo andro, Peerat Bunrit, hanaovana “fanitsiana fomba fihetsika” noho izy nitarika vondrona tantsaha ao an-toerana mba hiady ny zony hana-tany. Atoa Bunrit io dia mpitarika iray ao amin'ny Federasionan'ny Tantsaha Tatsimo ao Thailandy avy ao amin'ny faritanin'i Surat Thani.
Araka ny efa nolazain'i Veera Prateepchaikul ao amin'ny Bangkok Post, dia tsy manatsara loatra ny fampihavanam-pirenena ny fampiantsoana hanaovana “fanitsiana fomba fihetsika” avoakan'ny fitondra-miaramila fa mbola manitatra ny hantsana efa misy eo amin'ny mpifanandrina ara-politika. Ny fifanatreha-tava ifanaovana amin'ny manampahefana ara-miaramila dia “natao hampangina na tsy hampihetsika ny mpanohitra,” hoy ny nosoratany.
‎”Izay no mampalahelo amin'ny zavamisy ara-politika, ny halalin'ny tsy-fifampitokisana eo amin'ny vondrona roa mifanandrina, izay mahatonga ny fampihavanam-pirenena ho adidy sarotra,” hoy i Prateepchaikul.
Mahazo ‘fanitsiana fomba fihetsika’ any an-trano ny Mpitarika ao amin'ny fanoherana
Jeren'ny fitondra-miaramila ho tsy mamokatra ny fijery ara-politika manohitra ny vinan'ny mpitarika ny fanonganam-panjakana sady Praiminisitra Prayut Chan-ocha. Vao nampiantsoana ho ao amin'ny Foiben'ny Faritra Ara-Miaramila Voalohany ao Bangkok ny mpikambana parlemantera iray taloha taorian'ny fiampangany ny fanintsanana ilay praiminisitra naongana Yingluck Shinawatra.
Na izany aza, nandefa manamboninahitra iray hihaona aminy ao an-tranony ny tafika.
Manamboninahitra miaramila iray nitsidika ny Mpitarika ny [akanjo] Mena tao an-tranony ho ‘fanitsiana fomba fihetsika’
Miseho vatana any amin'ny semineran'ny fiarahamonim-pirenena momba ny fahafahana amin'ny aterineto ny miaramila
Tamin'ny alahady lasa teo, nisy vondrona fiarahamonim-pirenena iray nitarika seminera tao Bangkok hizara ireo ahiahy sy olana momba ny fandrafetana ny lalànan'ny heloka bevava an-tserasera ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Talanjona tamin'ny fahatongavan'ny miaramila tampoka ny mpikarakara sy ny mpandray anjara. Nisy aza miaramila iray nanolo-tena ho mpandray anjara fitenenana tamin'ny lahavolana natao.
Miaramila sy mpitsikilom-panjakana anisan'ireo nanatrika ny dinika amin'ny volavolan-dalànan'ny heloka bevava an-tserasera. Saripika avy amin'ny pejy Facebook an'ny tranomboky Santi Pracha Dhamma.
Amin'ny fanerena hametrahana famerana henjana ny fanehoan-kevitra sy ny fisorohana ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, dia naka dingam-pihemorana betsaka amin'ny fampihavanam-pirenena sy ny fanitsiana ny fitondra-miaramila. Ny fampanginana ny vahoaka amin'ny anaran'ny fanatsarana ao amin'ny firenena dia mety hiteraka hoavy tsy mitombina hoan'ny “tanin'ny tsiky” izay very hehy.